ပိတောင်ဘေးမဲ့တော ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာနှင့် စာသင်ကျောင်းများရှိ ဒေသခံပြည်သူနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ (၂၀.၁၂.၂၀၁၃၊ ပိတောင်)
မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝ ရေ၊ မြေ၊ တောတောင်များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများပေါများ ကြွယ်ဝ သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သစ်တောများသည် အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များ ပေါက်ပွားရှင်သန် ရန် ကောင်းမွန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားများကို ဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို အလေးထားအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သဘာဝနယ်မြေ များတည်ထောင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဇီဝမျိုးများထိန်းသိမ်းရေး၏ အရေးကြီးမှုကို သိရှိပြီးသည့်အလျှောက် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရေး နယ်မြေများတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘေးမဲ့တောများ၊ ဥယျာဉ်များတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သစ်တော ဥပဒေများ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေး မူဝါဒ၊ ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရှေး မြန်မာမင်းများ လက်ထက်ကတည်းက ဆင်ကို ရတနာတစ်ပါးအဖြစ် တန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါသည်။ ဆင်ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သစ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်းသည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည့်အတွက် ယနေ့တိုင် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ကြိုးဝိုင်း၊ ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် တရားမဝင်သစ်နှင့်သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ ခိုးယူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် စီမံချက်ချမှတ်၍ ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
REDD+ ဆိုင်ရာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်းသတင်း( ၁၇. ၁၂ . ၂၀၁၃ )၊ နေပြည်တော်
မြန်မာနိုင်ငံသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အပူပိုင်းဒေသသစ်နှင့်ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်း (ITTO)၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သစ်တောကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စီမံကိန်းများကို ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သစ်တော ဦးစီးဌာနနှင့် ITTO တို့ပူးပေါင်းပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့လူသုံးနည်းသစ်မျိုးများ ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်သို့ မိတ်ဆက်ခြင်းစီမံကိန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကာ ယနေ့အချိန်အထိ စီမံကိန်း(၈)ခုကို ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဒေသခံပြည်သူလူထုများအား ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝ ရေ၊ မြေ၊ တောတောင်များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပေါများ ကြွယ်ဝသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သစ်တောများသည် အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များ ပေါက်ပွားရှင်သန် ရန် ကောင်းမွန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားများကို ဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို အလေးထားအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သဘာဝနယ်မြေ များတည်ထောင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်တွင် တရားမဝင် သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ (၁၆.၁၂.၂၀၁၃၊နေပြည်တော်)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ကြိုးဝိုင်း၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် တရားမဝင် သစ်နှင့်သစ်တော ထွက်ပစ္စည်းများ ခိုးယူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် စီမံချက် ချမှတ်၍ ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဧပြီလ မှ နိုဝင်ဘာလအထိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ
ကျိုက်ထီးရိုး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံပြည်သူများအား ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သဘာဝပတ်၀န်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနအနေဖြင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများဖြစ်သော အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများက ဒေသခံပြည်သူများအား ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးခရိုင်တို့တွင် တရားမဝင် သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ကြိုးဝိုင်း၊ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် တရားမဝင်သစ်နှင့်သစ်တော ထွက်ပစ္စည်းများ ခိုးယူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် စီမံချက် ချမှတ်၍ ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နေပြည်တော်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တရားမဝင် သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးရေး အဖွဲ့သည်(၁၇.၁၂.၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင်ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်သပြေကုန်းအဝိုင်းအရှေ့ဘက်မှ တရားမဝင်